Iintetho ezili-10 ziThetha Uthando kuGab malunga
Iintetho zeNtetho zibonise amaHlabathi Uthando lokufumana
Kukho ilizwi elidala elihambayo, "akukho nto elitsha phantsi kwelanga." Ngeendlela ezininzi, loo nto idibanisa ihlabathi lemihla ngemihla kwaye intetho yokuhlwa ebusuku ibonisa ngokugqibeleleyo. Ngokukodwa xa uthetha malunga nento ebonisa ngokwenene ngayo . Masijongane nayo, ininzi intetho ibonisa ukuba ngabemi bemihla ngemihla efanayo.
Ngokuqhelekileyo i-quantum physics ngesihloko. Akukho mculo weklastiki okanye uncwadi lwangaphambili. Hayi, umboniso wezonxibelelwano wanamhlanje unomdla kuphela ngezihloko ezimbalwa.
Ubuncinane phambi kwekhamera.
Ukuba uyazibuza ukuba zeziphi ezinye zalezi zihloko, zezi zifundo zethu eziphezulu ezi-10 ziboniswa rhoqo.
# 1 - Iifilimu kwiveki yokuvula
Ngokwesiko, intetho efana ne " Show Tonight Show " yileyokuqala xa ama-studio ekhuthaza ukukhutshwa kwabo kwi-blockbuster entsha. I studio izothumela inkwenkwezi yayo okanye umphathi wayo omkhulu ukuba ahlale kufuphi nomphathi kunye ne-wax malunga nendlela le movie-enye ye-movie yodwa-yiyona movie ebhetele kakhulu eyenzile. Oko kunjalo, de kube ifilimu elandelayo ihamba.
# 2 - Imibukiso yeTV Ngethuba lokuPhumela
Ukufelwa kuyisiteketiso esinikezelwa kulezo zinyanga ezimbalwa ngamnye ngonyaka apho amanethiwekhi omabonwakude athatha amaxabiso abo okuthengisa ngokusekelwe kwinani labantu ababukele imiboniso yabo. Njengamafilimu, amanxibelelwano aya kuthumela iinkwenkwezi zabo zeTV ukuze baqhube iprogram, benethemba lokwenza amanyathelo angaphezulu kwimiboniso. Ngaloo ndlela, le nto idonsa ngaphezulu kweedola kwiibhanki.
# 3 - I-albhamu ye-Latest Music ikhutshwe
Konke malunga nokuphakanyiswa, akukho ncinane into ekuthethileyo malunga nalo mbandela.
Ibhendi yangoku, i-hip entsha enye, inkwenkwezi ye-pop ye-buzz-isivakalisi somculo yintetho yedolophu yokubonisa intetho xa i-albhamu entsha iyakusikhululwa.
# 4 - Izopolitiko
Kukho izinto ezimbini ongazixoxanga ngazo ngentetho ehloniphekileyo: ezopolitiko kunye nenkolo. Kwiyona nto ininzi, intetho yemiboniso yeentetho kubini bobusuku nobusuku iya kubambelela kulo mva.
Kodwa xa kuziwa kwezopolitiko, libale malunga nalo.
I-Monologues, i-skits-skits, kunye neengxoxo eziqhelekileyo zizaliswe ngombutho wezopolitiko, imibono kunye ne-hyperbole. Awukwazi ukuvula iTV ngaphandle kwecala elinye okanye elinye linika umbono wabo ogqithisileyo okanye intetho yomdlalo webusuku emva kwexesha lokuzonwabisa ngokucukuceza ngohanahaniso.
# 5 - iMicrosoft Makeovers
I-TV yamaSuku ihamba ngokugqithiseleyo xa ifika ekuboniseni ukubonisa uhlobo kunye nemikhosi ebakhokela. Sekunjalo, kubonakala ngathi yonke inkqubo, evela " I-Steve Harvey Show " kwi " Ellen DeGeneres " kwi "Oogqirha" kunye no " Dkt Oz ," nandiphe inzuzo enhle.
Uhlobo lwe-makeover luyahlukahluka, kodwa umxholo ufana. Yonke into emangalisayo ngaphambi nangemva. Ziyabakhuthaza, yingakho asikwazi ukufumana okwaneleyo kubo.
# 6 - Ukupheka okumnandi
Ucinga ukuba esi sihloko siya kugcinwa kwi-Food Network kwaye, ubuncinane, " uRachael Ray ." Nope. Iiprogram zemini ebuthandweni ziyakuthanda ukungena ekhitshini kwaye zidonsa i-concoction entsha kwi-backyard ibhola, i-fashionable party, iholide ezayo, okanye i-new spin kwi-dish classic.
Ekuseni kubonisa ngathi " Namhlanje ," "I-Good Morning America" ​​kunye ne "CBS Le Masa " ziyaziwa ngokugqithisileyo kweli candelo.
# 7 - Ngubani oyihlo?
Esi sihloko sixhaphake kuphela kwintlobo yesigxina semiboniso yeentsuku.
Awuyi kubona ebusuku kwaye ubonisa ngathi "u-Ellen" kunye ne "I-View" ayiyi kuxoxa ngesihloko. Kodwa ukuba umboniso wakho uhambelana neminqweno, i-fatherhood is going. A kufuneka ukuba, nokuba.
Ubonisa ukuba bazijonga ngokwabo ngaphezu kwamathandabuzo amathandabuzo athi "Maury" kunye no " Jerry Springer" ngamanye amaxesha asondela. Ewe, nangona " uDkt Phil" unokukhupha umxholo ngexesha elide, kodwa ngokuqhelekileyo kuninzi yoluntu.
# 8 - Izibhengezo
Olunye utywala lomini lweemiboniso zeentetho kunye nemiboniso esondela. Esi sihloko sihlale sigxile kumntu oyinkulungwane-1 okanye umfazi owazala abantwana abali-10 - i-slideshow oddballs yaseMelika. Kwimali-mboleko, oku kubonisa ukuzama ukuhlalutya "iindaba zehlabathi ngeveki " -i-headlines, kodwa ngokuphindaphindiweyo kunoko, ziphosa nje umlilo phezu komlilo.
# 9 - I-Gossip
Kweli hlabathi lanamhlanje lokuhleka kunye nejelo zentlalo, imiboniso yeentetho ikhawuleza ukuyifumana kwi-prattle yakamuva.
Ngokugqithiseleyo kungenjalo, le ngxowa igxothwa ngamahlaya kunye ne-liner-one, iikhiti kunye nama-parodies. Kodwa ukuba uthetha ngazo kwiindaba zakho zokutya okanye ukuhamba kwakho kwe-Twitter, unokuqiniseka ukuba abaphathi be-tech-savvy baxubusha nabo, nabo.
# 10 - iMemes kunye neNtsholongwane
Kule meko, sichaza i-meme kwisimo sengqondo somntu, nokuba ngaba umntu, indawo, okanye into. Imemes kunye neevidiyo eziyintsholongwane zingabantakwabo beentlebo.
Ukuba abantu beplanking, iindibano zokubonisa iintetho zixoxa ngeplanki. Ukuba ividiyo yebhokhwe ekhangelekayo yenza i-Facebook yayo yonke, uyayibona kumboniso. Oku kuthetha ntoni ngokuba ne-pulse kwi-culture pop. Kuphela nje ukuba le pulsi ixutywe kwi-caffeine ne-Grumpy Cat.
Iimpawu ezili-10 eziphezulu zeLas Vegas Zonke ixesha
Inkwenkwezi ejikelezileyo yeNtshona North Pole
Ubulili, uhlobo oluthile lweziNdaba zeSpain
Imfazwe Yehlabathi II: iBristol Beaufighter
Imithetho Eyisibhozo Eya Kukunceda UkuLahla I-Fat kunye neNcwadana yokuLahla kwamafutha
Ngubani Owona Owona Mhle Kakhulu Unamanzi Okubamba?
Izakhiwo zeSilayidi kwi-PowerPoint